IJapan Rail Pass, ithikithi lokuhamba ngeJapan. Isebenza kanjani? | Ukuhamba kwe-Absolut
I-Japan Rail Pass, indlela ekhululekile kakhulu yokuhamba eJapane
USusana godoy | | Japan
Uma uhlela uhambo oluya eJapanKumele wazi ukuthi uma usufikile lapho, isitimela sizoba yindlela yakho yokuhamba ehamba phambili. Ngenye yezindlela ezikhululeke kakhulu ukusuka kwenye indawo uye kwenye. Ngakho-ke, uma sesivele sikhethe ezokuthutha, manje kufanele sithole i-Japan Rail Pass.
Ithikithi ongahamba ngalo kuyo yonke inethiwekhi yesitimela ebanzi onayo eJapan. Vele, kukhona okunye okuhlukile okufanele kwaziwe. Thola konke odinga ukukwazi ngaye Kudlula ujantshi waseJapan bese uthola le ndlela elula yokukwazi ukuhamba ngaphandle kwezigameko ezinkulu.
1 Iyini i-Japan Rail Pass?
2 Yiziphi izitimela engikwazi ukufinyelela kuzo?
3 Ngingayithenga kuphi i-Japan Rail Pass?
4 Izinhlobo zaseJapan Rail Pass nezintengo
5 Ngubani ozothola i-Japan Rail Pass?
6 Ngingakwazi ukugcina isihlalo?
7 Ingabe kufanelekile ukuthenga i-Japan Rail Pass?
Iyini i-Japan Rail Pass?
Njengoba sesishilo, okubizwa ngeJapan Rail Pass kunjalo ithikithi elikunikeza ukufinyelela kwinethiwekhi yesitimela yaseJapan. Singayichaza futhi njengohlobo lokudlula. Ngayo, sizokwazi ukufinyelela iningi lezitimela ezilawulwa izinkampani zeqembu elibizwa nge-JR.
Yiziphi izitimela engikwazi ukufinyelela kuzo?
Njengoba sishilo, ungaba nokufinyelela ngeJapan Rail Pass kuningi lezitimela, ikakhulukazi lezo eziwela ngaphakathi kweqembu le-JR (Japan Railway). Okuncane kwezinye zezitimela ezibizwa ngejubane eliphezulu. Uzokwazi ukufinyelela eShinkansen, ngaphandle kukaNozomi noMizuho.
Noma kunjalo, enye yezinzuzo ezinhle ukuthi ungafinyelela kufayili ye- Umugqa weTokyo Yamanote. Ulayini ozokushiya kuwo wonke amaphuzu abalulekile alo muzi. Kukhona nolayini bendawo be-JR bendawo etholakalayo, kanye nesikebhe i-JR Miyajima. Ungaphinde uye kuNarita Express ezobuka indawo yezindiza nezindawo eziseTokyo.
Ngingayithenga kuphi i-Japan Rail Pass?
Omunye wemibuzo esemqoka ukwazi uluthenga kanjani lolu hlobo lwethikithi. Kubaluleke kakhulu ukwazi ukuthi kuhlala kungcono ukuyithenga ngaphambi kokufika eJapan. Kungani, ngoba intengo izobe iphansi kancane uma uyithenga eJapan. Ngakolunye uhlangothi, uma usukhona, itholakala kuphela eziteshini ezithile ezithile. Ngakho-ke kungcono njalo ukungazibeki engcupheni.
Ukuyithenga online kuyindlela yakho engcono kakhulu. Iwebhusayithi izokuthumelela uhlobo lwevawusha okuzodingeka ukuthi ulisebenzise uma ufika eJapan. Kungcono ukuthenga cishe izinyanga ezintathu ngaphambi kohambo lwakho. Uma usufikile, kuzofanele uye ehhovisi le-JR lapho uzobona khona zombili ezikhumulweni zezindiza naseziteshini zezitimela. Kuzoba lapha lapho kuzoshintshaniswa khona isigqebhezana futhi kufanele usho ukuthi uzosisebenzisa ngaluphi usuku.
Izinhlobo zaseJapan Rail Pass nezintengo
Unamaphasi wezinsuku eziyi-7, kanye ne-14 kanye ne-21. Kuzo zonke zazo ungakhetha uma ufuna ukuphasa okuluhlaza okuzoba isigaba sokuqala noma isivakashi noma isigaba sesibili. Kumele kuthiwe njengoba izitimela zingaphezulu kakhulu, isigaba somnotho sihlala sikulungele. Uzokonga kancane futhi uzohamba ngokunethezeka. Ukudlula kwabavakashi bezinsuku eziyi-7 kubiza cishe ama-euro angama-218.
Olunye lwezinsuku eziyi-14, futhi nakwezokuvakasha, ama-euro angama-348 futhi ekugcineni, uma ukhetha izinsuku ezingama-21 kuzodingeka ukhokhe ama-euro angama-445. Izingane ezineminyaka engama-11 ubudala zizokhokha uhhafu. Mhlawumbe uma sihamba ngesizini ephezulu noma ngamaholide, kungakuhle ukuthi sikhokhe imali ethe xaxa bese sikhetha ukubhuka endaweni yethu. Uma, ngakolunye uhlangothi, uhamba ikilasi lokuqala noma lokho okubizwa ngokuthi yiPass Green, khona-ke amanani ayahluka kancane. Izinsuku ezingu-7 zinenani lama-euro angama-291. Ngenkathi izinsuku eziyi-14, ama-euro angama-472. Ekugcineni, uma ukuhlala kwakho kuzoba ngama-euro angama-21, kuzofanela ukhokhe ama-euro angama-615.
Ngubani ozothola i-Japan Rail Pass?
Kulokhu kufanele kuthiwe IJapan Rail Pass yenzelwe izihambi zakwamanye amazwe. Kepha yebo, ngezinjongo zezivakashi nokuthi ziyisikhathi esifushane eJapan. Ngale ndlela, iyatholakala kunoma yiluphi uhlobo lomhambi wangaphandle njengesivakashi sesikhashana. Yize lolu hlobo lwethikithi belungahloselwe abantu bobuzwe baseJapan, kulo nyaka lokhu kushintshe kancane. Kubukeka sengathi uma behlangabezana nochungechunge lwezidingo ezithile ezinzima, bazokwazi nokuzuza kukho.
Ngingakwazi ukugcina isihlalo?
Iningi lezitimela ezisheshayo linayo izihlalo ezingabekelwa. Kodwa-ke, azikho ezitimeleni zendawo. Ukwenza ukubhuka kwesihlalo, kuhlala kubiza kakhulu, ngaphandle kokuthi une-Japan Rail Pass. Ngale ndlela, kuzoba mahhala ngokuphelele. Akuphoqelekile ukugcina isihlalo, noma ngabe uma uzothatha uhambo olude kungakuhle kakhulu. Eziteshini ezifanayo, unamahhovisi lapho ungabhuka khona, ngoba le sevisi ayitholakali ku-inthanethi.
Ingabe kufanelekile ukuthenga i-Japan Rail Pass?
Leli thikithi liyakufanelekela uma sizothola izindawo ezahlukahlukene. Okusho ukuthi, uma uzovakashela iTokyo noma isifunda saseMount Fuji nakwezinye izindawo, kungahle kungabe kusakufanele. Ngaphezu kwanoma yini ngoba yizindawo ezithile ongazikhokhela amathikithi angashadile. IJapan Rail Pass izohamba, ukwazi ukubona ukuvakashela izindawo ezahlukahlukene kakhulu futhi ugcine engqondweni ukuthi nsuku zonke uzoshintsha indawo oya kuyo. Uma uhlela ukujabulela IKyoto, kanye neTokyo, iKobe noma iHiroshima phakathi kwabanye, khona-ke yebo kuzokunxephezela. Uzokonga imali eningi ngeJapan Rail Pass.
Uma ngabe ubusucacile mayelana nendawo oya kuyo, manje usunesikhuthazo esisha sokuyazi kangcono. Akungabazeki, IJapane ingenye yezindawo ezinobuhle obuningi, ezinamakhona ahlukile futhi-ke, ngezinkumbulo ezinhle okufanele uzijabulele. Ngakho-ke, iyiphi indlela engcono yokwenza ngaphandle kokutshala imali kuthikithi esivumela ukuthi sikufinyelele kukho konke lokhu.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » I-Japan Rail Pass, indlela ekhululekile kakhulu yokuhamba eJapane
Yini ongayibona eLondon
IVolendam, idolobhana lendabuko lokudoba